Miezaha mba maharaka ny Fasana Raider Lara Croft rehefa mandeha amin'ny mampientam-po sy mahasoa Casino traikefa nahafinaritra ny reels. Ny fanaovana ny nitsambikina avy amin'ny lalao video ny sarimihetsika dia mora. Mamerina Feat, ny slot dika manana ny mahazatra Lara Croft nahazo loka ho anareo eo amin'ny 5 reels, 15 paylines lalao.
Tomb Raider Lara Croft marika
Raha tokony ho famoronana, ny mahazatra sary hita ao amin'ny filma mandrafitra ny fanehoana an'ohatra ny Fasana Raider Lara Croft slot lalao. Watch Lara rehefa mamely ny fandresena mametraka ny reels niaraka tamin'ny basy, Bengal ny tigra, sampy, Puzzles sy ny fanehoana an'ohatra mampiseho karatra ho eny an-reels.
Tomb Raider Lara Croft no hanapaka ny 5 reels amin'ny paylines Tsikirity amin'ny 15.
Wild: Ny lalao famantarana ny Fasana Raider Lara Croft dia afaka whiplash akory va ny sary famantarana hafa avy amin'ny reels mba hamorona ny mandresy payline. Ny lalao ny 7,500 vola madinika nahazo loka azo rehefa 5 ireo marika hita eo amin'ny reels.
ampielezo: Ny fahasahiana sy ny sahisahy Lara no aelezo izay miseho eo amin'ny reels amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza ny vola aelezo Fandresena. Izy dia afaka manao ny lalao po kokoa raha 3 na mihoatra ny azy hiseho eo amin'ny reels mba hanaitra ny maimaim-poana spins. Hahazoana ny 10 maimaim-poana spins amin'ny 3x multiplier. Ho eto reappear mba hanaitra ny maimaim-poana spins manodidina.
Tombony iray hafa manodidina ny solika ny mpilalao Fandresena dia ny Fasana Bonus. Mitsena 3 na mihoatra ny Bonus Idol fanehoana an'ohatra ny nahatonga an'ilay bibidia lalao mba handresy hatramin'ny 2,500 vola madinika. Mifindra eo amin'ny efijery vaovao izay tsy maintsy haka 3 avy amin'ny 12 zavatra mba handresy ny kisendrasendra multipliers. Aoka ianao ho tahaka ny endri-javatra valisoa azo retriggered.
ahy / Max Bet isan-kofehy ireny (£ / $ / €): 0.01 - 0.05
Jackpots (£ / $ / €): 7,500 vola madinika (base lalao)
Hampionona ny lalao malaza manao ny tetezamita ny slots amin'ny ambaratonga samihafa ny fahombiazana. Tomb Raider Lara Croft tahan'ny ambony sy ny fifadian-kanina sy ny sary gameplay. Tena Tena mendrika milalao ny tsara sy ny fientanentanana payouts.